Cristiano Ronaldo Oo Ka Hadlay Rikoodhihii Juventus Ka Mudaharaadday Iyo Arrimo Kale
HomeChampions LeagueCristiano Ronaldo Oo Ka Hadlay Rikoodhihii Juventus Ka Mudaharaadday Iyo Arrimo Kale
Xiddiga kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Cristiano Ronaldo ayaa ka hadlay guushii farxadda lahayd ee ay ugu gudbeen wareegga semi-finalka tartanka Champions League iyo murankii Juventus ee rikoodhihii uu garsoore Michael Oliver daqiiqaddii labaad ee wakhtiga dheeriga ah u dhigay Madrid.
Ronaldo oo warbaahinta la hadlay markii ay ciyaartu dhamaatay, ayaa waxa uu sheegay in rikoodhahaasi uu ahaa mid sax ah, waxaanu yidhi: “Maan fahmin sababtii Juventus u mahaharaadeen, waayo Lucas xagga dambe ayaa laga reebay, haddii aan rikoodhaha lagu geli lahayna gool ayey noqon lahayd.”
Ronaldo waxa kale oo uu ka hadlay wixii uu dareemayay markii uu rikoodhaha laagayey, culayskii saarnaa iyo sidii ay taageereyaashu indhaha ugu wada hayeen, waxaanu yidhi: “Culaysku wuu badnaa, laakiin waan is dejiyey, waxaanan ogaa inaan noqon doono go’aamiyaha ciyaarta.”
Cristiano Ronaldo waxa kale oo uu ka hadlay dhibaatadii Real Madrid kala kulantay Juventus, waxaana uu yidhi: “Waanu dhibaatoonay, laakiin waxay naga caawinaysaa inaanu wax ka barano. Kubadda cagta, lama quusto, waana inaad dagaallanto illaa dhamaadka. Madrid waxay dhalin karaysay goolal badan, laakiin Juve iyo Buffon ayaa aad u wanaagsanaa.”